December 2020 - SANTHITSA
တကယ့်အချစ်စစ်ဆိုတာ … ပိုက်ဆံ ရှိဖို့ မလိုဘူး အတူတူ ကြိုးစားလို့ဖြစ်တယ်။ နောက်တွန့်နေစရာ မလိုဘူး အတူတူ ရင်ဆိုင်လို့ရတယ်။ ရုပ်ချောဖို့ မလိုဘူး သစ္စာရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။ အားငယ်နေစရာ မလိုဘူး အတူတူ မျှဝေခံစားဖို့တော့ လိုမယ်။ သိပ်ချစ်ကျတဲ့ ချစ်သူတွေဆိုတာ… ဘယ်လိုပြသနာတွေနဲ့ပဲ တွေ့ကြုံတွေ့ကြုံ အနည်းဆုံးတော့ လက်တွဲ မဖြုတ်ခဲ့နိုင်တာမျိုးပေါ့… အရောင်ဆိုးထားတဲ့ အချစ်တွေထက် ပကတိအခြေအနေလေး တစ်ခုအပေါ် နားလည် လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို ပိုတန်ဖိုးထားသင့်တယ်… ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို လက်တွဲဖို့ဆိုတာ ဘာဆိုဘာမှ မလိုဘူး တကယ်ချစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်မဟုတ်လား ….။ #တကယ့်အချစ်စစ်ဆိုတာ … တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်မိသွားကြပြီဆိုရင် အကွာအဝေးဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အသက်ကြီးတာ ငယ်တာတွေ …
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ …
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ … ကိုယ်က သူ့ရဲ့အရိပ် ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်က သူ့အနားကို မရောက်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်က သူ့ဆီမှာ အမြဲ ရောက်နေတတ်တယ်။ ကိုယ်က သူ့အပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှု လေးတွေကို ပြချင်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုလေးတွေကို သိစေချင်တယ်။ ရယ်စရာလေးတွေ ပြောပြရင်း သူ့ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးချင်တယ်။ သူ့မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိတဲ့အခါ နားထောင်ပေးရင်း နှစ်သိမ့်ချင်တယ် အားပေးချင်တယ်။ သူ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိတဲ့အခါ သူ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေတဲ့အခါ ထပ်တူ ခံစားတတ်လာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အဆင်မပြေမှု လေးတွေကို ရင်ဖွင့်ချင်သလို … သူ့ရဲ့ နှစ်သိမ့်မှု သူ့ရဲ့ အားပေးမှုတွေက …
ယောကျ်ားလေးတွေ လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ….
ယောကျ်ားလေးတွေ လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ…. ယောင်္ကျားလေးတွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေးဆိုတာ လောကကြီးမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေးတွေကိုရော ဖတ်စေချင်ပါတယ်နော်…. (1) ဉာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဉာဏ်ရည် တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဉာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ …။ (2) ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်က အဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို ကြိုးပမ်းနေချိန်၊ သူကကိုယ့်ကို အမြဲအားပေးနေတယ်။ အားပေးတာ တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာကိုပါ သင်ပြပေးသူပါ။ …
ကျွန်တော် ပိုက်ဆံ သိပ်ရှိချင်တယ်ဆိုတာ အဲဒါတွေလဲ ပါတယ်ဗျ….
လက်စတာကို နိုင်ရင် ယူနိုက်တက်တို့ အမှတ်ပေး ဖလားကို စိန်ခေါ် နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
လက်စတာကို နိုင်ရင် ယူနိုက်တက်တို့ အမှတ်ပေး ဖလားကို စိန်ခေါ် နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ လက်ရှိ ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း အမှတ်ပေး ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ သာမက ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာပါ တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ရလဒ် တွေကို မရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ အနာဂတ် အသင်းမှာ ဆက်လက် ရှိနေမလား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းမှာ ယူနိုက်တက်တို့ ဆက်တိုက် ပြသသွားခဲ့ကြတဲ့ ကွင်းအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် …
အိမ်မပိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင် မင်း ဒါလေးခနလောက် နားထောင်ကြည့်ပါအုံး.” ချစ်သူဖြစ်ပီး 1 လလောက်က အရမ်းကိုအေးတိ အေးစက် နိုင်လွန်းတဲ့ ဂျိုသားမလေးတွေပေါ့… အဲ့ဒီ ဒဏ်ကို မင်း ခံနိုင်ပီလား.. မက်စင်ဂျာမှာ ချက်နေရင်းနဲ့ အဖေ သို့မဟုတ် အမေခေါ်လို့ နှုတ်မဆက်ပဲ လိုင်းပေါ်က ဆင်းသွာရင် မင်းစိတ်ထဲ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေ ထွက်လာမှာ အသေချာပဲ… အဲ့ဒါလေးရော သည်းခံနိုင်ပီလား.. အရမ်းလွမ်းလို့ ကိုယ်က ဖုန်းခေါ်ရင်တောင် အဖေမေရှိလို့ မကိုင်ရဲတဲ့ အခိုက်တန့် အိမ်မပိုင်တဲ့ ဂျိုသားမလေးတိုင်းမှာ ရှိတယ်… အေး ဖုန်းပြောရပီဆိုလဲ မဟုတ်တာ လုပ်ထားသလို ခိုးပြောရတာ မင်းချစ်နိုင်တာ သေချာတယ်ပေါ့..” သူများ အတွဲတွေ လူသိရှင်ကြား …
“True_Love “💓 အချစ်စစ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
“True_Love “💓 အချစ်စစ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ကောင်လေးက ပြောတယ်… ❝ ငါတို့ လမ်းခွဲကြရအောင် ❞ ကောင်မလေး : : ❝ ကောင်းပြီလေ ❞ ကောင်လေး ❝နင်နဲ့ငါ ကျောခိုင်းပြီး ခြေလှမ်း တစ်ရာထိ ပြည့်အောင် လျှောက်ကြမယ်… နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ကြေး ပြီးရင် နင့်လမ်းနင်သွား ငါလည်း ငါ့လမ်း ငါသွားမယ်… နောင်ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေ အဖြစ်နဲ့ပေါ့ ❞ ကောင်မလေး : : ❝ ကောင်းပြီလေ ❞ နှစ်ယောက်သား ကျောခိုင်းလိုက်ကြသည် ။ ပြီးတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှေ့တည့်တည့်သို့ ခြေလှမ်းများ ရေတွက်ရင်းဖြင့် သွားကြသည် ။ ကောင်လေးက …
ဆောင်းတွင်းပိုင်းမှာ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ ရောဂါများ
ဆောင်းတွင်းပိုင်းမှာ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ ရောဂါများ ၁။ နှလုံးရောဂါ နှလုံးရောဂါဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ ပိုအဖြစ်များတယ် ဆိုတာကို လူအများစုက မသိကြပါဘူး။ အေးတဲ့အချိန်မှာ သွေးလွှတ်ကြောတွေဟာ ကျုံ့သွားပြီး နှလုံးကနေ သွေးတွေ စုပ်ထုတ်ရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ နဂိုတည်းက နှလုံးရောဂါအခံလည်း ရှိတယ်ဆိုရင် ဆောင်းတွင်းမနက်စောစော လမ်းထလျှောက်မယ်ဆိုရင် နေစထွက်ချိန်မှ လျှောက်တာ ပိုမိုသင့်လျော်ပြီး၊ မနက်စာကိုလည်း တနင့်တပိုး မစားသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဆောင်းတွင်းမှာ ညစာကိုလည်း လျှော့စားတာက နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ ရင်ကြပ်ရောဂါ တစ်ကယ်လို့ သင်ဟာ ပန်းနာရင်ကြပ်သမား တစ်ဦးဆိုရင် ဆောင်းတွင်းမှာ ပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့လေဟာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ပိုမိုတင်းကြပ်စေပြီး အသက်ရှုရ …
FIFA Puskas Award အကောင်းဆုံး ဂိုးဆုကို ဆွန်ဟောင်မင် ဆွတ်ခူးရရှိ
FIFA Puskas Award အကောင်းဆုံး ဂိုးဆုကို ဆွန်ဟောင်မင် ဆွတ်ခူးရရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့် ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ သောကြာနေ့က ကျင်းပတဲ့ ဖီဖာ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဂိုးဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆွန်ဟာ အဆိုပါဆုကို ရရှိတဲ့ ဒုတိယမြောက် အာရှသား ဖြစ်လာပြီး ပထမဆုံး ကိုရီးယား ကစားသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖီဖာအကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းကနေ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆွန်ဟာ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဘန်လေ အသင်းဘက် သွင်းယူတဲ့ ဂိုးဖြင့် Fifa Puskas Award ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ဖီရန်ပူစကတ်စ် ကို …
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေမှန်း သိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေမှန်း သိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး… အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့က ပြောကြပါတယ် …. ။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် … ။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေး အရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။ (၁) အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ မတွေးမိပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို သူအရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေလို့ပါပဲ …